Nezvedu - Hemgrinder
LED Kura Chiedza
Veg / Ruva Fomula
Linear Bar Chiedza
Hemgrinder ndiyo mhando yeShenzhen Gesheng Technology Co, Ltd.
Hemgrinder yakazvipira kune iri nyore basa: kupa yakaderera mutengo, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, pamwe neyepamberi chimiro uye yakanakisa dhizaini!
Kune makumi maviri ejekiseni ekuumba michina, makumi maviri anofa-achikanda michina, anorema punch, chaiyo CNC lathe, nekubuda kwegore rimwe kwemamiriyoni makumi maviri. Zvigadzirwa kubva mukugadzirwa kuenda mukutakura zvinowongororwa, mumutengo uye mhando ine zvachose mhedzisiro! Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa pasi rese uye zvinakidzwa nembiri yakanaka. Hembrinder's kuvimbika, simba uye kunaka kwechigadzirwa kwave kuchizivikanwa neindasitiri iyi. Isu tinoshuvira kuwana vazhinji vanogovera kubva kunyika dzakasiyana.
Isu nheyo yedu kudzikisa mitengo, kuvandudza kukwikwidza pamusika uye kuwana zvakabatsirana uye kukunda-kuhwina mibairo. Mhando yekutanga, mutengi kutanga, kuperera kutarisa, kuvandudza uye hunyanzvi ndeyedu tenet. Gamuchira iyo kutungamirirwa uye kuchinjana kwevashandi vemuindasitiri!
Kubva pakagadzwa, iyo mhando yave ichiomerera kune matatu akanaka "mhando, vatengi kuvimba, yakanaka service" sevhisi. Kuti uite zvinodiwa nemusika uye chengetedza zvido zvevatengi
Uzivi hwebhizinesi: kutendeka, kunaka, kukunda-kuhwina!
Pfungwa yebasa: vese vashandisi svoshure!
Tichitarisa kumashure kwezvakapfuura, isu tazara neshungu, takatarisa kumberi mune ramangwana, isu tine chivimbo zvakanyanya! Hemgrinder inogara ichitora bhizinesi gumi rekuti "kutevedzera yakakwana mhando uye kugadzira chimiro chechinyakare", nemoyo wese wakasununguka maitiro
Gamuchira vatengi kuti vauye kuzokurukura, kuongorora uye kutungamira!
Kero: 1816 Bldg G, Huary guta panorama, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, China
1816 Bldg G, Huaria guta panorama, Dist 27, Dalang Bao'an dist, Shenzhen, China
© HEMGRINDER 2020 ZVESE ZVESE ZVAKAITIKA.